LinkedIn na-agbasawanye Ọrụ Nrụọrụ Companylọ Ọrụ | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 13, 2018 Tuesday, February 9, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na Facebook ahapụla ibe maka ịnweta ihe oriri, ọ dị ka LinkedIn na-ewere ohere iji nyere ndị azụmaahịa aka ịchụpụ mmekọrịta mmadụ na mgbakwunye na ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ ọhụụ na ibe profaịlụ ụlọ ọrụ.
Oha obodo di mkpa na oganihu ahia obula. Ndị ọrụ, ndị mmekọ, ndị ahịa na ndị na-achọ ọrụ nwere mpaghara, yana ọnụ, nwere ike inye aka kpalite uto ụlọ ọrụ gị site na mkparịta ụka bara uru. Sparsh Agarwal, Ngwaahịa Ngwa, LinkedIn Pages
Taa, LinkedIn kwupụtara peeji nke LinkedIn - ọgbọ na-esote Peeji Companylọ Ọrụ LinkedIn. E wughachila peeji ndị ọzọ site na ala iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka ụdị, ụlọ ọrụ na otu dị iche iche, site na obere ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ, iji kwalite mkparịta ụka bara uru na obodo LinkedIn karịrị 590 nde ndị otu.
LinkedIn na - eweputa ihe kariri nde 2, vidio, na edemede na ndepụta kwa ubochi, mmekorita ndia na eto eto. Emeputara ohuru ohuru ha iji mee ka ndi obodo na mkparita uka di na LinkedIn ya na ndi ulo oru, ndi ahia, na ndị na-eso ụzọ.
Ezubere ibe iji nyere ndị otu aka ka ha na ndị otu jikọọ, kwalite azụmaahịa ha ma wulite njikọ na-adịgide adịgide. Iji mezuo ebumnuche a, a na-ewu peeji nke atọ dị elu:
Soro Mkparịtaụka Dị Mkpa - Ndị nlekọta obodo, ndị a makwaara dị ka admins, bụ ọkpụkpụ nke usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Peeji na-enye ha ngwa ọrụ ha chọrọ iji kwalite mmekọrịta ha na obodo ha kwa ụbọchị. Admins nwere ike biputere mmelite ma zaghachi okwu, na ngwa ngwa ngwa LinkedIn maka iOS na gam akporo. Ndị admins nwekwara ike jikọta peeji ha na hashtags, n'ihi ya, ha nwere ike ị listena ntị ma zaghachi mkparịta ụka na-eme gbasara akara ha ma ọ bụ isiokwu ndị dị mkpa na LinkedIn. Kedu ihe ọzọ, ebe admins nwere ikike izipu onyonyo, vidiyo vidiyo na ederede na ibe ụlọ ọrụ LinkedIn ha, ha nwere ike ịkekọrịta akwụkwọ ugbu a, dị ka ngosi PowerPoint, Akwụkwọ Okwu na PDF iji kọọ akụkọ ọgaranya ma sie ike.
Mara ma Na-ege Ntị - Otu n’ime ihe ịma aka kacha admins bụ ịmata ụdị ọdịnaya ga - aba uru n’obodo ha, ma ọ bụghị n’ozi ha nwere ike daa. Anyị emeela Atụmatụ Ntuzi, Njirimara ohuru nke na-ebupụta isiokwu na ọdịnaya na-adabara na ndị na-ege ha ntị na LinkedIn. Site na nghọta ndị a, ndị admins nwere ike ịkọwapụta ma mepụta ọdịnaya nke ndị na-ege ha ntị ga - esonye. Ọrụ taabụ, nke na-enye anya maka ọdịnala ụlọ ọrụ gị, ọrụ yana ihe ọ dị ka ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ gị.
Soro Ndị Gị Na-eme Ihe - Ndị ọrụ ụlọ ọrụ bụ akụ ha kachasị ukwuu ma nwee ike bụrụ ndị nkwado kachasị. Ime ka olu ha dịkwuo elu nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka ịme njikọ siri ike na ndị na-ege ha ntị. Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa otu ngwaọrụ iji nyere ndị otu aka itinye aka na ndị ha site na iwebata ikike ịchọpụta na ịkekọrịta ozi LinkedIn nke ndị ọrụ ha na ibe ha. Anyị na-ewepụkwa ike ịzaghachi na ịkesa ọ bụla na LinkedIn ebe akpọrọ Page ụlọ ọrụ, dị ka akaebe ndị ahịa na nyocha ngwaahịa. Nke a na - eme ka ụlọ ọrụ gosipụta mkparịta ụka ndị mmadụ na - enwe maka ha, ma nwee ike inyere akara ha aka dị elu karịa igwe mmadụ.
Nweta akwukwo site na Ngwa oru Ichoro
LinkedIn emeela ka ndị mmekọ API ha ka mma ka ọ dịrị ndị admins mfe itinye mkparịta ụka na LinkedIn site na API. Dịka ọmụmaatụ, site na ijikọ ngwaahịa na Hootsuite, ndị admins nwere ike ịnweta ọkwa ugbu a n'ime Hootsuite mgbe enwere ọrụ na ibe LinkedIn ha.
Karịrị ndị ọkachamara ọkachamara 590, LinkedIn bụ ebe kachasị mma maka ụdị iji jikọta ndị ahịa, ndị ọrụ na atụmanya. Obi dị anyị ụtọ na anyị bụ ndị mbụ na-elekọta mmadụ media management ngwọta na-ewu kwụsịrị LinkedIn ọhụrụ ificationsma Ọkwa API ka anyị ahịa ike n'ụzọ dị irè karị ụgbọala njikọ aka na LinkedIn. Ryan Holmes, Onye isi oche & Onye guzobere Hootsuite
LinkedIn esonyekwara na Crunchbase iji gosipụta nghọta ego na ndị na-etinye ego na LinkedIn Pages, na-enye ndị otu LinkedIn nghọta zuru oke banyere profaịlụ azụmahịa nke ụlọ ọrụ.
Iji mụtakwuo banyere ibe LinkedIn na otu esi eme ka ha rụọ ọrụ maka nzukọ gị, biko gaa ebe a. LinkedIn amalitela ịgbalite ahụmịhe ọhụụ ọhụụ na US ma mee ka ọ dị maka azụmaahịa niile n'ụwa niile n'ime izu ndị na - abịanụ.
Tags: LinkedInpeeji nke ụlọ ọrụ njikọprofaịlụ ụlọ ọrụ njikọNjikọ ụlọ ọrụ njikọNjikọ njikọ